Home ၊အညာနွေတမာမြေ: ဒို့ရွှေမြန်မာတွေ အီးလိုမှာ ခေသူမဟုတ်ပါ
ဒို့ရွှေမြန်မာတွေ အီးလိုမှာ ခေသူမဟုတ်ပါ
မြင်းလှည်းသမား အဆုံး နဲနဲပါးပါးတော့ ပြောတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးကြည့်တော့… ပြင်သစ်လူမျိုးက သူဘုရားသွားချင်တာကို သူ့ကို
နောက် ကားသမားတစ်ယောက်ကလဲ ခရီးစဉ်ထွက်သွားတယ်… နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပဲ….
ဒါပေမယ့်ကားသမားကတော့ သူ့ကားနှိုးလို့မရလို့ ချွေးတွေပြန်ပြီး
်ကားသမားလဲ နဂိုကမှ ကားစက်မနိုးလို့ဒေါသထွက်နေရတဲ့အထဲ အခုလိုလာပွားတော့
အဲဒီမှာတင်နိုင်ငံခြားသားတွေက မီးတုတ်ကြီးတွေမြင်တိုင်း လူကြီးစီး
သူတို့ပြောတာကြည့်ပြီး အရမ်းကိုပြောတက်ချင်တာပေါ့..ခင်တဲ့ ဂိုက်တွေကလဲ
နောက်ထပ်အဲဒီအစ်မကြီးကိုပဲ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က အိမ်သာတက်ချင်လို့မေးတယ်…
အိမ်သာကတည့်တည့်သွားလို့မရဘူး… ခြံရဲ့အစွန်မှာ… လမ်းမှာ
This way… you go. You go and ကွေ့ ကွေ့ go ဆိုပြီး
လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ပြလိုက်တာ နိုင်ငံခြားသားလဲ အိမ်သာ
ကိုတန်းရောက်သွားတယ်တဲ့…သြော်..... သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဟုတ်နေတာပဲလို့…..
စင်္ကာပူကို အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတယောက်က သဘောင်္တွေမှာ သံချေးတွေကို တူနဲ့ထုခွာရတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်၊
သူအလုပ်လုပ်နေတာကို စင်္ကာပူက အလုပ်သမားခေါင်းက လည်းအလုပ်ခွင်မှာ ကြီးကြပ်နေတာပေါ့၊
အဲလိုလုပ်နေရင် သူထုနေတဲ့ တူဟာ အလုပ်လုပ်နေရင်း ရေထဲကို ပြုတ်ကျသွားတယ်၊
ဒီတော့ မြန်မာအလုပ်သမားက တူကျသွားတော့ အလုပ်သမားခေါင်းဆီကို တူထပ်တောင်းတာပေါ့
ကျနော်တူအလုပ်လုပ်ရင်း ရေထဲကျသွားတယ် နောက်ထပ်တခု ထုတ်ပေးပါဦးလို့ပြောချင်တာ ပြည့်စုံအောင်မပြောတတ်ဖြစ်နေတယ်
နောက်တော့ သူ့ဦးနှောက်ထဲ ပေါ်လာသလို ပြောချလိုက်တယ်
i am တုံတုံ ပလုံစွပ် give another one တဲ့
၀k ဆိုပြီး နောက်တူတလက် ပေးလိုက်တာပဲ
ဖေါ်ဝပ်မေးမှ ရသောဟာသများကို စုစည်းတင်ပြပေးထားတာပါ၊
Posted by အညာနွေတမာမြေ anyarnwaytamarmyay at 9:07:00 PM